Nepali | News Filmy | Page 172
निशाको खण्डन : ‘लभ बाईट हैन’
April 13, 2014 7:47 am
निर्देशक समाजको वर्कसप उद्घाटन समारोहमा पुग्दा लभबाईट गसिपमा परेकी अभिनेत्री निशा अधिकारीले उक्त गसिपको खण्डन गरेकी छिन्।
आफू अभिनित फिल्म मुखौटाको फष्टलुक पोष्टर रिलिज समारोहमा निशाले कपाल आईरन गर्ने क्रममा आईरन रडले पोल्दा दाग बसेको प्रष्टाएकी हुन ।’कपाल आईरन गर्ने क्रममा भएको दुर्घटनालाई यहाँहरुले लभ लभबाईटका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएछ तर त्यो भर्खरै बसेको घाऊ थियो ।’ उनले भनेकी छिन् ।
‘नाईँ नभन्नू ल’ ले दुई दिनमै ६६ लाखको ब्यापार गर्‍यो
होस्टेल, काली र ६ एकान ६ पश्चात नाईँ न भन्नु ल ले यस किसिमको उच्च ईनिसियल कलेक्सन गरेको हो । फिल्मले शुक्रबार र शनिबार मोफसलका पर्दाबाट ३२ लाख बढी र काठमाण्डू उपत्यकाबाट ३४ लाखको ग्रस कलेक्सन गर्दै ६६ लाख बराबरको कुल ग्रस आम्दानी गरेको छ । । यो खबर तयार पारुन्जेल सम्म मोफसलको साँझको शोको ब्यापार चाहि जोडिएको छैन् तसर्थ ६६ लाखको रिपोर्टमा थप केही लाख थपिन सक्छ । ‘काठमाण्डू बाहिर ‘धुम थ्री’ को भन्दा ज्यादा बिजनेस छ’ ब्यापारको आँकडा बढेपछि मोफसल वितरण हेरिरहेको एफ.डी कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीप उदयले भनेका छन् ।
चलचित्र संघको ४२ औँ अधिवेशन बैशाख २७ मा
April 12, 2014 7:05 am
हल सञ्चालकहरुको छातासंगठन चलचित्र संघको ४२ औँ अधिवेशन आउदो बैशाख २७मा हुने भएको छ । हालै बसेको संघको कार्यसमिति बैठकले बैशाख २७ गते नयाँ नेतृत्व ल्याउने बिषयमा सहमति गरेको हो । राजकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको कार्यसमिति अब प्रदीप उदयको नेतृत्वमा अगाडी बढाउने बिषयमा संघ भित्रका सदस्यहरुबीच छलफल भईरहेको छ ।
२०७० का स्क्यान्डल/विवाद
April 12, 2014 4:38 am
२०७० मा फिल्म उद्योगमा त्यस्तो धेरै उतारचढावपूर्ण भएन । गसिप र स्क्याण्डलहरुले त्यति ठूलो प्रश्रय पाएन भने खासै तकडभडकका कुनै प्रगति वा दुर्गति भएनन् । तैपनि सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा २०७० सालभित्र केही घटनाले भने स्थान पाए । विगतका तुलनामा केही कम लाग्ने यस्ता घटनावलीलाई हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।
फिल्म अवार्डको बाढी बढ्यो/नृत्यकार संघले पनि अवार्ड गर्ने
जसरी क्षमता भन्दा बढी फिल्महरु बार्षिक रुपमा रिलिज भईरहेका छन् त्यसैगरी छमता भन्दा बढी अवार्ड कार्यक्रमहरु घोषणा हुन थालेका छन् ।चलचित्र बिकास बोर्डले गर्ने राष्ट्रिय फिल्म अवार्ड छाडी अरु अवार्डहरुको हिसाव गर्ने हो भने नेफ्टा फिल्म अवार्ड, फिल्मीखबर डि.सिने अवार्ड, थोरै म्यानपावरमा चलिरहेको बक्स अफिस फिल्म अवार्ड र पछिल्लो बर्षदेखि एन.एफ.डिसी फिल्म अवार्ड हुन थालेका छन् ।
नाईँ न भन्नु ल २ को देशभर उत्साहप्रद कलेक्सन
गीतकै कारण चर्चित बनेको नाईँ न भन्नु ल २ ले उत्साहप्रद ब्यापार गर्न सफल भएको छ ।आजबाट रिलिज भएको यो फिल्मको ब्यापार काली फिल्मको ओपनिङ बराबरको रहेको मोफसल डिष्ट्रीब्यूसन चिफ एफडीका अध्यक्ष प्रदीप उदयको भनाई छ । काली यस बर्षको ब्याबसायिक रुपमा तेश्रो नम्बरमा पर्न सफल फिल्म हो ।
बार्षिक समीक्षा : बर्ष ७० क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटीकै वर्चश्व
April 11, 2014 4:14 am
२०७० का फिल्महरु संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा करिब सयको हाराहारीमा प्रदर्शनमा आए । सानो फिल्म उद्योग तर संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा निकै ठूलो उद्योगजस्तो देखिने नेपाली फिल्म उद्योगको परिपाटी यसपटक पनि दोहोरियो । भोजपुरीमा डब गरिएका तीन फिल्म सहित ९७ वटा फिल्महरु यसवर्ष प्रदर्शनमा आए । तर दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने यी ९७फिल्महरुबाट उत्कृष्ट दश फिल्मको नाम छान्ने हो भने पनि निकै नै गाह्रो हुन्छ ।
तस्बिरमा नाईँ न भन्नु ल प्रिमियर /जीवन लुइँटेल देखिएनन्
April 11, 2014 3:02 am
प्रतिक्षित फिल्महरुको लिष्टमा गनिएको नाईँ न भन्नु ल २ को बिहिबार साँझ प्रिमियर शो गरिएको थियो । एक कार्यक्रमका लागि हङकङ पुगेका कारण हिरोइन प्रियंका कार्कीका लागि एक दिन ढिला गरि आयोजित उक्त प्रिमियर शोमा निर्देशक विकास आचार्यका निकै मिल्ने हिरो जीवन लुइँटेल चाहि देखिएनन् । जीवन फिल्ममा अतिथि कलाकारका रुपमा छन् । प्रिमियरमा पाहुनाको रुपमा अर्का हिरो निरज बराल चाहि श्रीमती निवेदितासंगै देखिएका थिए ।
लभ बाईट बोकेर निशा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा !
April 10, 2014 9:16 am
राजेश हमाल चिफ गेष्ट अनि एम.सी तर्फ निशा अधिकारी देखिदा बिहिबार बिहान निर्देशक समाजको वर्कसप उद्घाटन समारोह अन्य फिल्मी कार्यक्रम भन्दा केही भिन्न थियो । कार्यक्रम सामान्य शैलीमा उद्घाटन भएको थियो । एम.सी गर्दा निशाले पोखरामा हुन लागेको वर्कसपको बिषयमा निकै तारिफ पनि गरिन । उनले आफ्ना लागि काठमाण्डू भन्दा पनि पोखरा बिशेष रोजाईको शहर रहेको बताएकी छिन् । तर उनले कार्यक्रम सम्पन्न गरे लगत्तै उनको घाटीमा न्यूज फिल्मीले लभ बाईट देख्यो ।
महानायकले क्ल्याप ठोक्दा !
सुन्दर नगरी पोखरामा पाँच दिन सम्म चल्ने चलचित्र निर्देशक समाजको वर्कसपलाई महानायकले उद्घाटन गरेका छन् । हलिउडबाट मान्यताप्राप्त दुई विज्ञ जस्टिन डि ओ नील र जेम्स ईभान एगर्टनको विशेष उपस्थितीमा हमालले वर्कसपलाई क्ल्याप ठोकी उद्घाटन गरेका हुन् ।